South Afrika Online Casino Sites - Online Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > South Afrika Online Casino saịtị
(423 votes, nkezi: 5.00 si 5)
South Africa bụ otu n'ime ebe kachasị mma maka ndị ọrụ ịgba chaa chaa. Ma ugbu a, ịgba chaa chaa n'ịntanetị na mba a dị oke njedebe, na oge ụfọdụ gara aga na a machibidoro iwu.
Onyonyo 5 kachasị elu n'Ịntanet Afrika
N'okpuru iwuchibido iwu siri ike, ịgba chaa chaa daba na 1992. Naanị 1994 ka a na-eche maka ụlọ ọrụ ahụ, mgbe ọchịchị ọhụrụ nke South Africa nabatara mgbanwe na iwu ịgba chaa chaa, ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa na casinos nke ala, nakwa ịkụ nzọ egwuregwu na ịkụ nzọ n'ịnyịnya n'Ịntanet. Ntụle ahụ malitere naanị na 1996.
Ka o sina dị, taa Ndị South Africa nwere ike ịme na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ nke casinos online, n'agbanyeghị eziokwu bụ na ọ bụ iwu na-akwadoghị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị, n'agbanyeghị nkwenye, nọgidere na-anabata ndị si South Africa, na-enye ha ohere igwu egwu na mpaghara ndịda South Africa (R).
Mkparịta ụka gbasara mmezi iwu na ọkwa gọọmenti South Africa na-aga n'ihu. A na-atụ anya ka ụlọ ahịa casinos n'oge na-adịghị anya ga-akwado. A kọrọ na nso nso a na gọọmentị nke Republic of South Africa kwetara inye ikikere 10 maka online casinos. Nke a ga-abụ nzọụkwụ dị ịrịba ama maka mmepe nke ụlọ ọrụ dị n'ógbè ahụ. Otú ọ dị, n'oge a kabeghị ọrụ ikikere ndị a.
Ụlọ ọrụ Slotegrator, nke nwere ahụmahụ dị ukwuu dịka onye na-azụ ahịa na onye ndụmọdụ na ụlọ ahịa ịgba chaa chaa n'Ịntanet, mere nnyocha ntanetị nke ebe nleta ịgba chaa chaa kachasị eleta na South Africa. Dabere na nke a, ndị ọkachamara mere ọkwa nke 10 kasị mara South Africa online casinos.
Ndepụta nke Top 10 South Africa Online Casino Sites
A na-anabata azụmahịa ịgba chaa chaa na South Africa kemgbe 1994. A na-akwado ụdị ịgba chaa chaa niile, ma e wezụga maka ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Naanị ịkụ nzọ egwuregwu na ịkụ nzọ n'egwuregwu ịnyịnya na-ekwe ka ịntanetị. Karịa XINUMX casinos na-arụ ọrụ na South Africa. Ụlọ ala kachasị mma dị na Johannesburg, Gauteng n'ógbè. E nwere nnukwu casinos 40, ha niile nwere ihe karịrị 4 tebụl maka egwuregwu kaadị, karịa ihe 180 slot machines na poker vidio.
Isi iyi foto: Akụkọ nke Ịgba chaa chaa
Nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa kasị ukwuu na GrandWest Casino & Entertainment World dị na Cape Town. E nwere tebụl 79 maka egwuregwu, tebụl poker 10, karịrị ihe 2500 slot na poker vidio.
Ụdị ndị a kacha mara amara nke ndị casinos South Africa:
Tsogo Sun nwere ikikere 14;
Sun International - ikikere 13;
Peermont Global - ikikere 8;
London Clubs International - License 1;
Enweta ego site na ịgba chaa chaa na South Africa na-adị otu ihe ahụ, a na-atụkwa ya n'ọtụtụ ijeri South Africa rand. N'ihi na ego 2015-2016 na-akwụ ụgwọ dị ukwuu site na azụmahịa ịgba chaa chaa iwu ruru ZAR 26.3 ijeri ma ọ bụ USD 1.86. Ego ụlọ ahịa na - eweta nnukwu ego - 70.5% nke nnukwu ego.
N'otu oge ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu na-ekere òkè na lotrị mba - 78.9%. Naanị 10.6% egwu na cha cha. Uzo ato nke onu ogugu mmadu abanyela n'egwuregwu ịgba chaa chaa. Ihe kariri ọkara ndị bi na-ele casinos ma ọ bụ ịgba chaa chaa bụ ụzọ kwesịrị ekwesị maka ịhazi ntụrụndụ.
Nkowa nkenke banyere South Africa
South Africa bụ Republic of South Africa, mba ndị omeiwu dị n'ebe ndịda Afrika. Nke a bụ mba kachasị emepe na kọntinent na naanị ala Afrika dị na G20 ("Iri Abụọ").
Mba ahụ na-aghọta asụsụ 11, ọ nwere ọtụtụ ndị ọcha, ndị Asia na ndị oji. Onye mbụ na-achị ndị Dutch na 1652. South Africa nwere ọgaranya n'oge gara aga - na 19th century a lụrụ agha Anglo-Boer maka diamonds na gold, na narị afọ 20th, e nwere ogologohebeheid. Ihe a nile hapụrụ akara na ọnọdụ maka ịzụlite azụmahịa, akụ na ụba, na ọha mmadụ.
Ego a bụ ske na South Africa, nke ZAR ma ọ bụ R. depụtara ya. Ọnụego ya na December 2016 bụ USD 0.0709 maka ZAR 1 ma ọ bụ ZAR 14.1 maka USD 1.
Obodo kacha ebuputa diamonds, gold, platinum, machinery and equipment. Mbubata - mmanụ na ngwaahịa. South Africa na-akwado 39th na ogo nke mba ebe ọ dị mfe ịzụ ahịa.
Akụkọ banyere ịgba chaa chaa na South Africa
A machibidoro azụmahịa ịgba chaa chaa na South Africa ruo mgbe 1994. Iwu, nke a na-akpọ Iwu Ịgba Chaa chaa South Africa, nke a nakweere na 1965, machibido ụdị ịgba chaa chaa ọ bụla, ma e wezụga maka agbụrụ ịnyịnya. A maara ha dịka egwuregwu.
Usoro casinos na-akwadoghị malitere ịmalite kemgbe oge 1970s nwụsịrị. Ha na-arụ ọrụ na bantustans Boputatsvan, Siskey, Transkei, Venda.
Bantustans - ihe puru iche n'akụkọ ihe mere eme nke South Africa. Ha dị ka ndapụ aka na United States, mana ha nwere àgwà ha. Nke a bụ ókèala nke e jiri mee ihe maka nchekwa ụmụ amaala nke South Africa. Ụfọdụ ndị bantustans nweere onwe ha, nke a mere ka o kwe omume ịhazi azụmahịa ịgba chaa chaa. Dịka ọmụmaatụ, na Bophuthatswane wuru Sun City.
Naanị ndị agbụrụ South Africa nwere ike ibi na bantustans, ọtụtụ ụmụ amaala enweghị ike ịbanye na ụlọ ọrụ iwu. Ka o sina dị, site na 1995 e nwere ihe banyere 2000 casinos na mba ahụ.
Mgbe apartheid kwụsịrị na 1994, ọchịchị gọọmenti wee bịa ike, ụdị ịgba chaa chaa nile edozila. Iwu Iwu Ịgba Chaa chaa nke Mba, nke e nyere na 1996, kwadoro usoro ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa. A na-enwetakwa ịnyịnya ịgba ịnyịnya dị ka ụdị ịgba chaa chaa.
Iwu nke ịgba chaa chaa na South Africa
Oge ịgba afọ maka onye ọkpụkpọ South Africa bụ afọ 18. Ụmụaka enweghị ikike igwu egwu na ịgba chaa chaa.
E nwere ihe atọ na-akọwa usoro iwu maka ịgba chaa chaa na South Africa:
Iwu Ịgba Egwuregwu Mba Nile nke 1996;
Iwu Ngwongwo Mba Nile 2004 - na - akwado nke gara aga;
Iwu Ndezigharị Ịgba Ngwá Ọrụ Mba nke 2008, nke na-ekpebi ọnọdụ nke azụmahịa ịgba chaa chaa n'Ịntanet.
Ụkpụrụ Ngwá Ọrụ Mba Nile nke 1996 na-akọwapụta n'ụzọ doro anya otú e kwesịrị isi kesaa ikikere licence n'etiti ógbè nke mba ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke ikikere bụ ikikere 40. E kesara ha dị ka ndị a:
Western-Cape province (etiti - Cape Town) - ikikere 5;
Mpaghara North-Cape (Kimberley) - 3;
East-Cape Province (Bisho) - 5;
State efu (Bloemfontein) - 4;
Ógbè North-Western (Mafeking) - ikikere 5;
Limpopo ma ọ bụ Northern Province (Polokwane) - ikikere 3.
Dịka otu ihe ahụ si dị, ọ dịghị òtù (nzukọ ma ọ bụ mmadụ) nwere ikike ijide ikikere 16 kasịnụ gafere mba ahụ ma ọ bụ karịa ikikere 2 na mpaghara dị iche.
Iwu Iwu Ịgba Egwuregwu Mba na-akọwa:
nkọwa nke ịgba chaa chaa;
ihe a na-ewere dị ka ịgba chaa chaa;
usoro nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ịgba Egwuregwu Mba.
Ndị na-agba chaa chaa na South Africa
Òtù Mba Ịgba Chaa chaa chaa - onye na-ahụ maka ịgba chaa chaa na South Africa. Ọrụ nke onye nduzi gụnyere:
chọpụta iwu nke azụmahịa ịgba chaa chaa na-arụ ọrụ;
nchịkọta ọnụ ọgụgụ;
onye na-ahụ maka ịgbazi ịgba chaa chaa.
The Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Iwu nke South Africa bụ maka ịhazi, nyocha, nyocha, nhazi na asambodo nke igwe-egwu egwu, usoro nlekota oru eletriki na ihe ndi ozo.
E nwere onye ọ bụla ọzọ na-ahụ maka azụmahịa ịgba chaa chaa nke South Africa - Association Casino Association nke South Africa (CASA). E guzobere mkpakọrịta ahụ na 2003. Ọrụ nchịkọta nke nzukọ:
jikọta ndị ọrụ ịgba chaa chaa na ndị na-eketa ihe;
nye ndi mmadu ihe omuma banyere cha cha;
iji nweta nghọta na nghọta karia nke azụmahịa nke ịgba chaa chaa.
Nzukọ ahụ na-eme ka ihe ọ bụla chaa chaa nke mba ahụ dị n'otu. Ndị nnọchiteanya nke gọọmentị n'onwe ya jide 37% nke mbak nke casinos dị iche iche nke ala. Ndị otu òtù ahụ na-enye karịa ọrụ 100,000.
Iwu nke ịgba chaa chaa online na South Africa
Iwu Ntugharị Ịgba Ụgwọ Mba nke 2008, nke na-agwụbeghị ugbu a, na-achọpụta na azụmahịa ịgba chaa chaa n'Ịntanet South Africa bụ nke iwu na-akwadoghị. Dị ka iwu na-akwadoghị dịka nzukọ nke ịgba chaa chaa n'ịntanetị, na ikere òkè n'ime ha. Nke - n'ihi na ọ bụghị ụdị ịgba chaa chaa n'Ịntanet ka amachibido.
Iwu ahụ amachibidoro ihe a na-akpọ "egwuregwu mmekọrịta":
ịkụ nzọ egwuregwu na netwọk;
ịkụ nzọ n'egwuregwu ịnyịnya n'Ịntanet;
na n'ozuzu ahịa nke ndị na-ede akwụkwọ. Dị ka o kwesịrị ịdị, onye nhazi nke BC kwesịrị ịnweta ikikere n'aka gọọmentị.
Ihe ọ bụla, ma onye na-ahazi ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ụlọ akụ na-eduzi azụmahịa maka ịgba chaa chaa na Intanet, a na-akwụ ya ụgwọ nke R 10 nde (USD 709 puku) na / ma ọ bụ 10 afọ nke mkpọrọ.
Otú ọ dị, iwu ahụ adịghị enye ntaramahụhụ maka onye ọ bụla. Site na nke a, ndị na-egwu egwuregwu nwere ike igwu egwu na cha cha, ndị sava na-etinye na mba ọzọ.
Ụdị ịgba chaa chaa na South Africa
Òtù Na-ahụ Maka Ịgba Chaa chaa nke mba na-eduzi ọkwa nke ịgba chaa chaa maka akaụntụ ya:
cha cha - egwuregwu ụlọ na oghere;
ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya na egwuregwu, nke a na-enye ha na ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-ekpo ọkụ;
igwe ndị nwere ọnụ ahịa na akara ntanye -Ndịọrụ Payout Machines (LPM);
Bingo-omenala na site na ikuku eletrik (Ogwe Bingo Terminals, EBT).
Egwuregwu casinos South Afrika na-enye ọtụtụ egwuregwu kaadị, ndị dị iche iche ọ bụghị nanị maka ndị Europe, kamakwa maka ógbè South Africa.
Dịka ọmụmaatụ, na Cape Town egwuregwu kacha ewu ewu bụ klawerjas (klawerjas) - ihe ochie Dutch egwuregwu na-ere ahịa, ọ ka na-ewu ewu na Netherlands. Ihe mgbaru ọsọ bụ ịnakọta ọnụ ọgụgụ kacha mma nke bribes.
The egwuregwu Kaluka (kalookie) - a ụdị rummy. Ihe mgbaru ọsọ bụ ịpị ụfọdụ njikọ.
Thuni (Thuni ma ọ bụ Thunee) bụ egwuregwu dịka nke South Africa. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ndị Asian na-ewu ewu. Iwu nke egwuregwu ahụ na-achọkwa ka ị gụọ ụfọdụ isi ihe.
Egwuregwu ndị ọzọ na-ewu ewu na South Africa:
cribbage bụ egwuregwu Bekee;
canasta (canasta) - a umu rhammi;
samba (samba) - ihe di iche nke ogwu;
skat (skat) - egwuregwu nke bribes from Germany;
nwamba na ụmụ oke (n'agbanyeghị na Malice) - ụdị asọmpi asọmpi;
shithead (shithead) - egwuregwu maka ọnwụ nke kaadị niile.
Ulo oru sitere na ahia onu ahia na South Africa
N'ihi na ego 2015-2016 na-akwụ ụgwọ dị ukwuu site na azụmahịa ịgba chaa chaa iwu ruru ZAR 26.3 ijeri ma ọ bụ USD 1.86.
Ego ụlọ ahịa na - eweta nnukwu ego - 70.5% nke nnukwu ego ha nwetara ma ọ bụ USD 1.3;
emesị ha enwere ọnụego - 16.9% ma ọ bụ USD 315 nde;
mgbe ahụ LPM (Ụlọ ọrụ nkwụsịghị ụgwọ, igwe na ụgwọ ịkwụsịtụ) - 9.0% ma ọ bụ USD 167;
na ebe nke anọ bingo - 3.6% nke nnukwu ego ma ọ bụ nde USD 66.
Ógbè dị iche iche na-eweta ego dị iche iche dị ukwuu site n'ịgba chaa chaa:
Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na Gauteng na-enweta ihe kachasị - 40% ma ọ bụ USD 745 ndebanye na 2015-2016 gbasara ego;
ebe nke abuo bu nke Western-Cape province -15.6% ma obu USD 291 nde;
ebe nke ato bu KwaZulu-Natal - 18.5% ma obu USD 344 nde.
Gauteng na-arụpụta ego kachasị elu na casinos, stakes na bingo. Enweta ego kachasị elu na mpaghara LPM site na ógbè Western-Cape - 30%.
Ọnụ ọgụgụ ígwè ọrụ oghere na casinos nke dị na South Africa bụ 2015. Ego si na nkwụsị - USD 23,415 USD
Ọnụ ọgụgụ nke tebụl dị na 2015 n'ọ bụla casinos na mba ahụ bụ 932 iberibe. Ihe ha na-enweta bụ USD 237 nde.
Ụtụ ịgba chaa chaa na South Africa
A na-atụle ihe ndị a na-emefu ego iji mee atụmatụ ego nke mba ahụ na ọtụtụ nde dollar. Na 2015, ndị isi South Africa natara $ 262 nde site na azụmahịa ịgba chaa chaa. Nke a na-eme 28% nke nnukwu ụgwọ ịgba chaa chaa.
Iwepụ ụtụ isi gụnyere ụdị ịkwụ ụgwọ atọ:
A na-anakọta ụtụ isi n'aka ụlọ ọrụ. Uru ya dabeere na ego nke ụlọ ọrụ;
ụtụ ịgba chaa chaa - ndị isi obodo na-anakọta n'aka ndị ikike. A na-agbakọ uru ahụ dịka ọnụọgụ ego nke ndị ikikere;
ụtụ ahịa a na-atụkwasị - a na-agbakọta na-adabere na uru a na-agbakwụnye n'oge ọ bụla nke mmepụta na mgbanwe nke ngwaahịa na ọrụ. A na-ebo ya ebubo na cha cha, ọ bụghị ndị egwuregwu.
Ahịa azụmahịa na South Africa
N'agbanyeghi na amachibidoro ịgba chaa chaa n'Ịntanet South, ndị egwuregwu niile nwere ike iji ọrụ casinos ụwa. Ndị na-egwu egwu nwere ike itinye ego na ego obodo, nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe. Mana enwere otu ntance: site na October 4, 2016, ndị nwe obodo nwere ike ijide mmeri nke ndị na-eme egwuregwu n'ịntanetị. Ngalaba ahia na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ ntinye aka na Bill Amụma Ntugharị Ịgba Ụgwọ Mba, dịka nke a, ụlọ ikpe nwere ikike ịghachị na ijide mmeri ndị egwuregwu ahụ.
Ya mere, ị nwere ike igwu egwu n'Ịntanet - ma ọ bụghị eziokwu na ị nwere ike inweta mmeri gị, n'ihi na ọbụna azụmahịa n'ime obodo ka amachibidoro.
Ụlọ akụ n'Ịntanet n'Ịntanet
Edenyere egwuregwu ịgba chaa chaa n'ịntanetị, bingo na lotrị ndị na-enweghị ikikere na 2010, mgbe ụlọikpe gọọmenti Gauteng machibidoro ụlọ ntaneti Swaziland dabeere na Pigg Peak. Emere ihe n'eme ya, ebe ọ bụ na mgbe ahụ, a nachibidoro ụlọ ụlọ online casinos kpamkpam.
Naanị ụdị atọ nke ịgba chaa chaa n'ịntanetị bụ iwu:
nchịkọta n'Ịntanet nke lotiri mba;
ịkụ nzọ egwuregwu;
ịkụ nzọ n'eje ịnyịnya.
Ihe ndị ọzọ na-agụnye na a na-akpọ "agba aja aja". Ọ na-anọgide na-ahụ ma gọọmenti ga-anọgide na-atụle nkwado iwu nke azụmahịa ma ọ bụ na ọ bụghị.
Iwu Bill ịgba ọsọ ịgba chaa chaa
Ruo oge ụfọdụ, Bill Billing Bill, nke nwere ike ịgba chaa chaa ịgba chaa chaa n'Ịntanet South Africa.
Ụgwọ Bill nke ịgba chaa chaa na-atụle:
ọnụ ọgụgụ ụgwọ na onyinye;
ibu ọrụ nke ógbè na National Board;
ụkpụrụ maka ihe ntanetị n'ịntanetị;
okwu nke ichebe ikike nke egwuregwu.
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, edepụtara iwu ndị a:
machibidoro igwu egwu umuaka;
machibido ịgbazinye ndị egwuregwu;
ejedebe ókè nke mgbasa ozi na n'ọkwá ụlọ ọrụ n'Ịntanet.
Na May 2016, a jụrụ iwu Bill ịgba ọsọ ọsọ.
Ndị nnọchiteanya nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ahịa na Ụlọ Ọrụ, nke na-emekọkwa maka ụlọ ọrụ ntụrụndụ, kwenyere na ụgwọ ahụ na-adọtaghị nlezianya anya na nsogbu ndị metụtara mmekọrịta na ịgba chaa chaa n'ịntanetị.
Mgbe a tụlere ụgwọ ahụ na May 27, 2016, onye so na National Liberation Party Shaik Emam (Shaik Emam) rụrụ ụka maka ịjụ ịnakwere ụgwọ ahụ:
"A na-ebibi ọrụ ndị nkịtị n'ihi na ha na-ekwe ka ndị na-acha ọcha chara acha iji kpuchie ụgwọ ha funahụrụ ha."
Ndị a bụ echiche zuru oke na gọọmentị. N'ezie, e nwere nnukwu ọnụ ụlọ nke casinos nke ala na-adịghị amasị eziokwu ahụ na weebụsaịtị na-ewebata ọtụtụ ndị ọzọ na ha. A na-ahụ ndị mmegide nke ụgwọ ahụ, dịka ọmụmaatụ, maka azụmahịa dị n'ịntanetị: na weebụsaịtị X1NUMX% nke ndị ọbịa na-ahọrọ na ebe nrụọrụ weebụ dị na casinos offline.
Onye na-akwado ụgwọ ahụ na onye nnọchianya nke Democratic Alliance, Geordin Hill-Lewis (Geordin Hill-Lewis) weere nke a:
"Iwu ahia bụ ụzọ kasị mma isi chebe ọha mmadụ. E nwebeghị ikikere Iwu Ndezigharị Ịgba Ụgwọ Ngwá Ọrụ nke 2008. N'ihi nke a, ịgba chaa chaa n'ịntanetị na-enwe mgbagwoju anya. "
Ndị na-akwado nkwado iwu nke azụmahịa na azụmahịa na arụrịta ụka dị otú a: gọọmenti efunahụ ọtụtụ nde mmadụ, ọ bụghị iwu iwu web-casino. Òtù Ndị Casinos nke South Africa (Association Casino Association nke SA) kwuru ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ:
"Mba ahụ furu efu banyere ZAR 110 nde (USD 7.8) na online casinos na-akwadoghị. N'otu oge ahụ, usoro iwu ike nke online casinos na-eme ka ụlọ ọrụ ala tụfuo ego. Uru uru na - eme ka 0.6% kwụsị. "
N'oge ahụ, esemokwu na azụmahịa dị n'ịntanetị anaghị anọgide na-edozi. "
Ebe kacha mma maka South Africa
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke casinos online ebe interface na-enye ndị South Africa aka igwu egwu:
Las Vegas Casino;
Egwurugwu Ime Anwansi;
Ngwongwo oghere ndị dị na Southinin casinos
Egwuregwu casinos South Afrika na-enye ohere ntaneti vidio ise nke nkịtị na ebe nrụọrụ weebụ:
Onye ọ bụla Jackpot;
Egwuregwu ịgba chaa chaa na South Africa
Dị ka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ịgba Chaa chaa na National na 2016, 15.3% nke ọnụ ọgụgụ mmadụ dum bụ ịgba chaa chaa mgbe niile.
Ruo afọ ise, ọnụ ọgụgụ ndị na-egwu egwuregwu na ụlọ ọrụ LPM, ụlọ ọrụ bingo, ịkụ nzọ na LPM dị ntakịrị. Ma ịzụta tiketi maka lotrị ala ahụ mụbara.
Dịka ọmụmaatụ, n'April 2015, a chọpụtara ọnụ ọgụgụ ndị a:
78.9% nke egwuregwu ịzụta tiketi lotrị ala;
11.2% igwu uzo;
10.6% - na cha cha;
7.1% - batrị nke onwe;
6.2% - ịnya ịnyịnya na ịkụ egwu egwuregwu;
17.5% nọ na ịgba chaa chaa iwu na-akwadoghị.
A na-amata egwuregwu ịgba chaa chaa na-akwadoghị na ụlọ ọrụ na-enweghị ikikere na online casinos. Ekwesiri ighota na n'ime afo ole na ole gara aga onu ogugu ndi mmadu na agba chaa chaa na ezighi ezi adalata. Na November 2012, 41% nke ndị egwu egwu na-akwadoghị. Ugbu a na 2015-2016 - naanị 17.5%.
A na-amata ịgba chaa chaa naanị 9.9% nke ọnụ ọgụgụ ndị egwuregwu. More blacks malitere igwu egwu -19.8% na 2015-2016. Ọnụ ọgụgụ nke ndị egwuregwu, ndị ọgbọ ha sitere na 25 afọ, na-amụba.
Online cha cha Australia
Ọ bụghị ihe niile dị mfe ịhọrọ ihe kacha mma online casino Australia na-enye. Site na mgbe ndị na-emepe ihe n'ịgba chaa chaa n'Ịntanet na-abịa ahịa nke mba a dị egwu na asọmpi ahụ dị n'ọhịa aghọwo ezigbo ọkụ. Ọ bụ ya mere anyị ji eji ogologo oge na-egwu egwu blackjack, ruleti, online pokies, poker vidio, egwuregwu ezumike na egwuregwu ndị ọzọ ndị na-agba chaa chaa na-ahọrọkarị na casinos dị iche iche maka ndị Australia. Ka anyị wee nwee ike ịkọ ihe anyị nwere mmasị na ihe anyị na-enweghị mmasị na saịtị ọ bụla nwere ike ịntanetị n'Ịntanet nakwa na anyị nwere ike ịdọ aka ná ntị ugbu a banyere ihe kasị mma Australian online casino na-adabere n'eziokwu anyị nwere.
Best online cha cha Australia nwere ihe na-enye
Mgbe anyị kpebiri ịchọta ihe kasị mma online casino Australia na-enye anyị na anyị chọrọ ịzọpụta oge ndị egwuregwu. Nke mere na ndị ọbịa nke saịtị anyị agaghị achọ ịchọrọ maka ebe nrụọrụ weebụ Ịntanetị nke kachasị mma nke ga-adịrị ha mma, mana họrọ otu site na ndepụta anyị kama ịmalite ịmalite nnukwu egwuregwu ozugbo. Ọ bụ ezie na ọrụ ahụ adịghị mfe, anyị ahọrọ ọtụtụ casinos ndị dabara nyocha anyị.
Ebube anyị ji mee ihe adịghị mgbagwoju anya. Nke mbụ, anyị na-aṅa ntị na àgwà na ọtụtụ egwuregwu ọ bụla n'ime ụlọ ntanetị ọ bụla maka ndị egwuregwu Australia. Ihe omimi nke oghere, roulette, blackjack, poker vidio, online pokies, na ndị ọzọ cha cha egwuregwu kacha mma.
Mgbe ahụ, enwerekwa ụgwọ ego ahụ. Ọ dị mkpa n'ezie ka ọtụtụ ndị a dị na ihe ha bụ. Ihe eji agba ụgwọ bụ ihe ndị egwuregwu na-enwetakarị mgbe ha na-abanye n'otu ụlọ chantanetị na ọ bụ nnukwu ego dị mkpa. Ma, ọ bụghị naanị ya ga-adọrọ mmasị. A ghaghị iburu ụdị ego ọ bụla ọzọ. Ebe ọ bụ na nkwalite ndị ahụ pụkwara inye aka n'ịkwalite akụ na ụma nke ndị egwuregwu ahụ, anyị enyochala ihe ha bụ na ma a na-edebe ha mgbe niile. Enweghi oge ịla n'iyi
O di nkpa ikwu na otu n'ime ihe kachasi mkpa maka onye obula o bula bu otu o si di mfe itinye ego na ulo cha cha ma wepu ego ya. Nhọrọ nke ụlọ akụ ga-adịgasị iche ma dị mma maka ndị ọbịa nke ebe nrụọrụ weebụ ịntanetị dị mma. Ma mgbe ọ na-abịa n'inweta casinos maka ndị egwuregwu si Australia na New Zealand, ha ga-enwe obere e-akpa ego POLi tinyere kaadị akwụmụgwọ, kaadị akwụmụgwọ ha na ndepụta nkwụnye ego ha ntanetị. Ọzọ, nchekwa nke azụmahịa niile ị na-ahụ maka ịzụ ahịa ga-abụ ihe kachasị mkpa nke ụlọ ịntanetị ị na-ahọrọ.
All niile anyị nwere n'ebe a na ndepụta nke n'elu kacha mma online casinos maka Australian egwuregwu. Ya mere ugbu a na a ga-dịghị mkpa ka ị na-eji oge achọ ihe internet maka kasị mma cha cha saịtị, ebe ọ bụ na i nwere ike họrọ otu n'ime ndị anyị na-enye ma na-emefu oge na-akpọ ọkacha mmasị gị egwuregwu kama. Iji mee ka search ọbụna ihe adaba n'ihi na ị anyị kewara casinos nkenụụdị na-agụnye ihe atụ ndị na nnukwu bonuses, ndị na-enye ndị na widest oke nke online pokies na na.
Iji ndụmọdụ anyị nwere na saịtị anyị, ị ga-enwe ike ịmalite ịkwụ ụgwọ ma na-emeri n'ime nkeji. Ma ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-edepụta casinos na-enye nsụgharị nke egwuregwu a kwadoro maka ngwaọrụ gam akụrụngwa nakwa maka iPhones na iPads, enwere ike igwu egwuregwu ọ bụla n'oge ọbụla ma ị nwere njikọ Ịntanetị.
0.1 Ndepụta nke Top 10 South Africa Online Casino Sites
2.1 Nkowa nkenke banyere South Africa
2.2 Akụkọ banyere ịgba chaa chaa na South Africa
2.3 Iwu nke ịgba chaa chaa na South Africa
2.4 Ndị na-agba chaa chaa na South Africa
2.6 Iwu nke ịgba chaa chaa online na South Africa
2.7 Ụdị ịgba chaa chaa na South Africa
2.8 Ulo oru sitere na ahia onu ahia na South Africa
2.9 Ụtụ ịgba chaa chaa na South Africa
2.10 Ahịa azụmahịa na South Africa
2.10.1 Ụlọ akụ n'Ịntanet n'Ịntanet
2.11 Iwu Bill ịgba ọsọ ịgba chaa chaa
2.11.1 Ebe kacha mma maka South Africa
2.11.2 Ngwongwo oghere ndị dị na Southinin casinos
2.12 Egwuregwu ịgba chaa chaa na South Africa
2.13 Online cha cha Australia
2.14 Best online cha cha Australia nwere ihe na-enye